अल्ट्रासोनिक कुकिंग: मिक्सर & रेसिपीहरू - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
अल्ट्रासोनिक्सहरू शक्तिशाली ब्लून्डरहरू र होमिनेजरहरू हुन्, जसको आवेदन प्रयोगशाला र उद्योगमा सीमित छैन। केहि वर्ष देखि, अल्ट्रासोनिक्सले आफ्नो बाटो पनि पेटू भान्सामा फेला पारेको छ। प्रतिष्ठित स्टार-आभारी पेटू रेस्टुरेन्टहरू, सबैभन्दा राम्रो खानाको सानो रत्न, खाना पकाउने स्कूल र शौकिया शेफहरूले अल्ट्रासोनिक यन्त्रहरू प्रयोग गर्दछ जसले आणविक व्यञ्जेल अनियन्त्रित व्यञ्जन सिर्जना गर्दछ। अल्ट्रासोनिक खाना पकाउने मूल कुराहरू तल फेला पार्नुहोस् र अल्ट्रासोनिक व्यञ्जनहरू द्वारा प्रेरित पाउनुहोस्!
यस भिडियोमा, हप्सबाट अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्रक्शन (ह्युमुलस ल्युपुलस) प्रदर्शन गरिएको छ। अल्ट्रासोनिकेटरको साथ UP200Ht caryophyllene र अन्य यौगिकहरू निकालिन्छ।
S2007 प्रोबको साथ UP200Ht को साथ हप्सको अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्यासन
अल्ट्रासाउन्डको साथ अभिनव व्यञ्जनहरू
कसरी अल्ट्रासोनिक प्रेरित प्रेरित बस्तुहरू सिर्जना गर्ने बारे थप सुझावहरू र चालहरू पढ्न तल गोली बुँदाहरूमा क्लिक गर्नुहोस्!
कफी - शीत बियर
अल्ट्रासोनिक तरंगहरू ठोस तरल मिश्रणहरूमा लागू हुन्छन् एक शक्तिशाली र प्रभावकारी निकासी विधि हो। अल्ट्रासाउन्डको साथ तपाईंको प्याला कफी ठन्ड-पेच गर्नुहोस्। तपाईंले हासिल गर्न चाहनु भएको बलमा निर्भर, एक कप ठंडे पानी र ध्वनिमा 1-2 कफी (वा बढी) कफी कफी पाउडरको थप्नुहोस्। कफी पाउडरको माध्यमबाट कफ्रिशन द्वारा कफी पाउडर हटाउनुहोस्। यदि तपाईंलाई कफी वा बेकिंग संघको रूपमा कफीको आवश्यकता छ भने, यसलाई चिसो प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईं यसलाई पिउन चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ यसलाई सानो गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको कप कफीको आनन्द लिनुहोस्!
अधिक वैज्ञानिक पृष्ठभूमिको लागि अल्ट्रासोनिक क्याफिन निकासी, यहाँ थप पढ्नुहोस्!
रक्सी, आत्माओं, रक्सी
अल्ट्रासाउन्डले तपाईंलाई तुरुन्तै शराब, साइडर, आत्मा र शराब उमेरको संभावना दिन्छ। या त तपाईं आफ्नो स्वाद को सुचारु गर्न एक अम्लीय शराब या तीव्र आत्मा को पुकारो या तपाईं ओक चिप्स जस्तै सोनी द्वारा शराब या शराब स्वाद।
बुढो को वाहेक, हाम्रो अल्ट्रासोनिक्स अल्कोहल संक्रमण बनाउन को लागि आदर्श हो। केवल तपाईंको स्वाद व्युत्पन्न जोड्नुहोस्, उदाहरणका लागि लेभेंडर, सुन्तला पिक्सेल चिप्स, कुचुर मिर्च तपाईंको ब्रेकमा (जस्तै वोडका, सेतो रम) र मिश्रणको ध्वनि – अधिमानतः एक बर्फ स्नानमा तापमान नियन्त्रण गर्न। सनक्कोकरण पछि कडा कणहरू रोक्न। तयार तपाईंको घर बनाइएको स्वादयुक्त शराब हो!
अधिक वैज्ञानिक पृष्ठभूमिको लागि अल्ट्रासोनिक वाइन उमेर, यहाँ क्लिक गरेर अधिक जान्नुहोस्!
चिंराट स्टक - मिशेलिन स्टार शेफ सांग-होन डिगेम्ब्रे को पाक कला
उनको निर्माण अल्ट्रासोनिक चिन्ता स्टक को तयारी को लागि, 2-मिशेलिन स्टार महाराज संग-हून डीगेम्ब्रे (एल'एयु डु टेम्प्स, बेल्जियम) सबै सामाग्री (चिंराट, पानी, टमाटर शुद्ध, गाजर, नमक) लाई 10% मिनेटमा 50% आयाममा पुष्ट गर्दछ।
संगै हङगेगेर: स्टार शेफ आफ्नो अल्ट्रासोनिकरेटरसँग UIP1000hd
125 ग्राम ग्रे चिन्ता
1 चम्मच टमाटर शुद्ध
1/2 गाजर, कटाई
1/4 चम्मच नुन
युल्ड: 1.5 लीटर
130 डिग्री सेल्सियसमा 20 मिनेटको लागि चिन्ता लगाउनुहोस्। सबै सामग्रीहरूलाई ठूलो बर्तनमा राख्नुहोस्। यन्त्र सेट गर्नुहोस् (हेलसिच UIP1000hd, B2-1.8, BS2d22) 10 मिनेट को लागि 50% आयाम मा sonication को। वांछित स्थिरता मा मिश्रण, तनाव, र कम।
सांग-होन डाइम्मिरे भिडियोको हेर्न, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
Gravy र Marinades
सोनक्किङले तपाईंको धुवाँ, चटनी वा अचाप बढाउनको लागि उत्तेजना र स्वाद निकासी प्रदान गर्दछ।
उदाहरण: रेड वाइन ग्रेवी
4 चम्मच बतख वसा पिघल्यो
1 diced प्याज
200mL रातो शराब
4 चम्मच पोर्ट
500mL सब्जी स्टक
साउसेपमा अवयव राख्नुहोस् र केहि मिनेटको लागि मिश्रण सिम्मर दिनुहोस्। एक बीकरमा भरिभराउनुहोस् र 60 को लागी हारे –90 सेकेन्ड एक जाल मार्फत तनाव र उबलते बिन्दुमा छिट्टै पुन: पत्ता लगाउनुहोस्।
अल्ट्रासाउन्ड यसको उत्कृष्ट निकासी प्रभावहरूको लागि राम्रो छ। जडीबुटी, पातहरू वा फूलहरू तपाईंको तरलमा राख्नुहोस् जुन तपाइँलाई दुरुपयोग गर्न चाहानुहुन्छ (उदाहरणका लागि पानी, रक्सी, तेल)। सुधारिएको अल्ट्रासोनिक निकासीको लागि यो संयन्त्रको सामग्री मार्नको लागि सिफारिस गरिएको छ किनकि साना कणहरू पूर्णतया अल्ट्रासाउन्डद्वारा प्रभावित हुन्छन्। ध्वनि, फिलिप्रेट – तयार छ तपाईंको इन्फ्यूजन!
तेल एक उत्कृष्ट स्वादिष्ट क्यारियर हो र यसैले अल्ट्रासोनिक निकाली भएका स्वादको साथमा उनीहरूलाई दुरुपयोग गर्ने आदर्श। अवयवहरू थप्नुहोस् जसको जात तपाईं तेल निकाल्न र तेलको प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ। उपयुक्त सामग्रीहरू जस्तै रास्पबेरीहरू छन्,
तेल मा अल्ट्रासोनिक जांच को सार्नुहोस् ताकि पौधे को भाग अल्ट्रासाउंड तरंगहरु द्वारा समान रूप देखि प्रभावित हुनेछन्।
स्थिर इन्धनहरू सिर्जना गर्न अल्ट्रासाउन्ड राम्रो तरिकाले प्रविधि हो। अल्ट्रासोनिकको रूपमा cavitation क्यान्सर ड्रिलहरू माइक्रोन र नैनो आकारमा, तेल र पानीको रूपमा अचलनकारी तरल पदार्थहरू मिश्रण गर्दै। यसको उत्कृष्ट पायलो प्रदर्शनको कारण, अल्ट्रासाउन्ड vinaigrette, dressings, sauces र gravies को तयारी को लागि प्रयोग गरिन्छ।
सिरका-इन-तेल vinaigrette (W / O) को 400mL को लागि: बेकरमा तेलको साथ सोनोट्रोड राख्नुहोस् र अल्ट्रासोनिक उपकरणलाई स्विच गर्नुहोस्। तेलमा बिस्तारै vinagre थप गर्नुहोस् (जस्तै अनुपात 1: 3)। सर्वश्रेष्ठ प्रभावहरूको लागि, तपाईं सिरिगे प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र सिरका सिधै सीधे जांच को भित्र गहन cavitation क्षेत्र मा इंजेक्शन गर्न सक्नुहुन्छ। ध्वनि अनुमान सोच्नुहोस्। 20-40 सेकेन्ड। कूलिंगको लागि बर्फको स्नान सिफारिश गरिएको छ। सिरका बूंदों तेल चरण मा गुप्त गरिनेछ ताकि तेल को स्वाद अधिक प्रभावी हुनेछ। यदि तपाईं प्रचलित सिरका स्वाद चाहनुहुन्छ भने तलको प्रक्रिया पछ्याउनुहोस्।
400mL को तेल-भित्र दाखिला विनाग्रेटी (ओ / डब्ल्यू): बेकरमा तेलको साथ सोनाट्रोड राख्नुहोस् र अल्ट्रासोनिक उपकरणलाई स्विच गर्नुहोस्। सिरकामा बिस्तारै तेल थप गर्नुहोस् (जस्तै अनुपात 1: 3)। सबैभन्दा राम्रो प्रभावका लागि, तपाईं सिरिइज प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तेलको सीधा तेलको इन्जेक्शन तल गहिरो cavitation क्षेत्रमा इंजेक्शन गर्न सक्नुहुन्छ। ध्वनि अनुमान सोच्नुहोस्। 20-40 सेकेन्ड। कूलिंगको लागि बर्फको स्नान सिफारिश गरिएको छ। तेलको बूढी सिरका चरणमा समाविष्ट गरिनेछ ताकि सिरका स्वाद हाइलाइट गरिएको स्वाद हुनेछ।
अल्ट्रासोनिक नानो-इम्ल्शन्स: यस भिडियोले पानीमा तेलको न्यानो-इमल्सनको द्रुत उत्पादन प्रदर्शन गर्‍यो। UP200Ht सेकेन्डमा तेल र पानी समरूप गर्दछ।
S200d14 प्रोबको साथ UP200Ht को साथ अल्ट्रासोनिक Emulsifai
अल्ट्रासोनिक बारे थप जान्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् उत्तेजना र यसको प्रभाव को बारे मा मार्जारिनको उत्पादन!
फल & तरकारी शुद्ध
तपाईंको रुचि को सब्जी या फल एक puree को माश। यदि शुद्ध छ धेरै मोटो छ भने, तपाईं केहि पानी, दूध वा तेल थप्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि म्यासले पनि उपचारको लागि मिश्रणमा अल्ट्रासोनिक जांच गर्न उत्प्रेरित गर्छ। अल्ट्रासाउन्ड सेलहरू तोड्छ र कोशिकाहरूबाट सबै जायजा, पोषक तत्वहरू र चिनियाँ रिलीज गर्दछ। यसैले,aतीव्र स्वाद र एक मोटो, चिकनी बनावट प्राप्त हुन्छ। सनक्कनद्वारा सबै सेल इन्ट्राट गरिएको प्राकृतिक चिनी रिजर्भ गरिएको छ भने, खुद्रा चीनी वा कृत्रिम स्वीटजरको अतिरिक्त पूर्णतया टाढा जान सकिन्छ, जुन विशेष गरी सुचारु र फल शुद्ध को लागी महत्त्वपूर्ण छ।
उदाहरण: कद्दीन सूप
500gr को भुना भयो कद्दू र सब्जी को शरद को 500mL जोड्नुहोस,2tblsp क्रीम र केहि मसाले। 3-4 मिनेटको मिश्रण। पनि सनक्कन र सजिलो पदार्थहरूको उच्च रिलीजको लागि, राम्रो हलचल अनुशंसा गरिन्छ।
नमक चुरोटको साथ 1 अण्डा जिरो मिक्स गर्नुहोस्, 1 चम्मच थप्नुहोस्। सरसफाई मिक्सर सोनस र ढिलो 8 tblsp जोड्नुहोस्। को तेल, 1 tblsp। नींबूको रस, केही जडी बूटी र काली मिर्च। ठुलो र अलि हिसाबको लागि बर्फीली नुहाउने क्रीमयुक्त, स्थिर पाईलो प्राप्त गर्न सिफारिस गरिन्छ।
शेलफिश व्यञ्जनको सिजनमा कच्चा ओस्टर्स सामान्यतया एक आइओटी भिनिरेट्रेट वा mignonette सँग सेवा गरिन्छ। तल नुस्खा एक धेरै ठीक आइज vinaigrette कि कच्चे ओइटर को नाजुक फ्लवाको मौसम बनाउँदछ, क्लासिक रूपमा आधाशेहेलमा सेवा गर्यो।
सामग्री: सेतो कपडाको ¼ कप (60 मिलीमिटर), ½ प्याजको कटाई (2½-3 औंस = 2½ -3 सानो सुत्केरी), ¼ कप (60ml) सेतो अशुद्ध चावल सिरका, 1/8 चम्मचको नुन, 1/8 चम्मच चिनियाँ, 1 ½ चिसो ताजा तातो पिचेरेरक्सस, लेमनको निचोड, गेनीशका लागि: कटाई चाइव्स, वैकल्पिक:3साम्राज्य सामन वा ट्राउट प्वाइन्ट
गरीब ¼ कप सेतो सिरका र एक गिलास बिक्रेतामा प्याला सेतो अनिकास चावल सिरका (राम्रो तरिकाले 2.8-3.9in / 8-10 सेन्टिमिटर व्यासको साथ)। सिरकाको साथ चिसो पानी वा बरफ स्नानमा गिलास बिक्रेता राख्नुहोस्। यूओ200 एचटी सोनाट्रोड S26d40 संग घुसाउनुहोस् र 20sec को लागि 50% आयाम सेटमा तरल हल्का हल्लाउनुहुन्छ, अल्ट्रासोनिक उपचार पनि सुनिश्चित गर्न को लागी तरल मा सोनोट्रोड को सार्नु पर्छ। 30sec को लागि पज गर्नुहोस् र 20sec को लागि sonication प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस्।
सिरका को अम्लता को रूप मा एक चिकनी, राउंडर स्वाद मा सिरका परिणाम को अल्ट्रासोनिकेशन कम हुन्छ।
टाउकोमा प्वाल पार्नुहोस् र तिनीहरूलाई ठुलो पार्नुहोस्। मिनिड कोंट्स, ताजा कुचल मिर्च, चीनी र नमक ग्लास बीकर मा जोडें र यसलाई एक चम्मच संग हलचल।
30sec को लागि धीरे-धीरे मिश्रण 50% आयाम सोनाट्रोड बिस्तारै हिँड्नु पर्छ।
रातभरि रेफ्रिजरेटरमा भिनिग्रेट चिल गर्नुहोस्। ससुराले विनाश हटाउन अप्ठेरो भित्तामा हलचल गर्नु अघि।
अल्ट्रासोनिक फ्रान्सेली फ्राइज
क्रन्च फ्रान्सेली आगो तयार गर्नुहोस् – को रूप मा आधुनिकतावादी भोजन देखि जानिन्छ – तपाईंको अल्ट्रासोनिक जांच प्रकारको उपकरण प्रयोग गरी। पहिलो, तपाईंको ताजा कट आलुलाई तातो तेलमा छोटो त्रयी बनाउनुहोस्। दोस्रो चरणमा, फ्रिज मध्यम तीव्रतामा हिँड्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई अहिले तेलमा फ्रिज हलचल गर्नुहुन्छ र त्यसपछि अल्ट्रासोनिक्स सबै फ्रिजको सतहमा पुग्न सक्छ। अल्ट्रासोनिक cavitation गैर दिखने fissures र आलु कोशिकाओं को दरार बनाउँछ ताकि स्टार्च उपलब्ध हुनेछ। निकालेका स्टार्च आलु थप क्रिस बनाउँछ। सोन्याक्सन पछि, सुनको र कुखुरा सम्म फ्रान्सेली फ्रिजलाई छोटो दोस्रो फ्राइङ उपचार दिनुहोस्। तिनीहरूलाई फ्राइकिङ तेलबाट हटाउनुहोस् र पेपर तौलियामा निकास गर्नुहोस्।
आफ्नो कुकुरको आनन्द लिनुहोस् स्टार्च-संक्रमित फ्रांसीसी फ्रिज अल्ट्रासोनिक्स तैयार क्याचअप र मेयोनेज संग!
मासु - टेंडरराइज गर्दै & म्यारिनेटि
अल्ट्रासाउन्डको साथ तपाईं आफ्नो मासु दोस्रो पाना भित्र निरुत्साहित पार्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको मासुको पोथी सिधै सोच्नुहोस् वा अन्नमा राख्नुहोस्। मध्यम आयाम सेट गर्नुहोस् र ठूलो अल्ट्रासोनिक सींग प्रयोग गर्नुहोस्। फाइलहरु को सतह मा धीरे - धीरे अल्ट्रासोनिक सींग ले जाएँ। अल्ट्रासाउन्डले रेशमलाई सफा गर्दछ र खुट्टा खोल्छ ताकि अजवाइनले तुरुन्तै प्रवेश गर्न सक्छ।
Xanthan गम को अल्ट्रासोनिक मिश्रण
अल्ट्रासोनिक्स हाइड्रोलोलोलोडलल गन्थन गम र ग्रुप व्यंजनहरु मा मोटीनर र स्टेबलाइजर्स को मिश्रण गर्न को लागी आदर्श हो। अल्ट्रासोनिक्स तीव्र कतरनी बलहरू सिर्जना गर्दा, पाउडरहरू जुन मेहनत हुने र चप्पल हुने गर्छन्, समानुपातिक रूपमा तरल पदार्थमा मिलाउन सकिन्छ। ज्यानन गम र ग्वार गम निकै द्रुत हुँदै गयो, जसले यसलाई एक ढाँचामा हिँड्न गाह्रो बनाउँछ। अल्ट्रासोनिक मिक्सले तपाईंलाई एकदम पनि र राम्रो मिश्रण प्रदान गर्दछ ताकि मिथन वा ग्वार गम पाउडर यसको पूर्ण गुणहरू बढाउन सक्छ। यसले तपाईंलाई कम मोटो बनाउने ग्लू पाउडर प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ। सनटेसनको अन्तर्गत धीरे - धीरे चटपिट गर्न वा गृहिणीलाई गान्थान वा गोरखा जोड्नुहोस्। बेकरमा अल्ट्रासोनिक जांच गर्न सार्नुहोस् कि पाउडर तुरुन्तै ध्वनिमा राखिएको हुन्छ र तरलमा मिलाइयो। जब तपाई अल्ट्रासोनिक यन्त्र बन्द गर्नुहुन्छ, तपाइँ तुरुन्तै मोटो पार्ने प्रभाव देख्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ भने xanthan foam, केवल ठूला टिप व्यास संग एक जांच छान्नुहोस् र तरल र xanthan गम माथि र तल निलम्बन मा अल्ट्रासोनिक जांच ले। तरल को सतह जब लगभग जांच (लगभग तरल सतह मा) तर, एयर बुलबुले एकत्रित हुन्छ, ताकि एक हल्का espuma बनाइन्छ।
अल्ट्रासोनिक सिरका उमेर
त्यसै गरी रक्सी र आत्माहरूको अल्ट्रासोनिक उमेरसम्म पनि दाखरसहरू कृत्रिम रूपमा अल्ट्रासाउन्डको उमेरमा हुन सक्छन्। छोटो अवधिको लागि सिरकाको सट्टा जवान दाखिलाको तेज अम्लता र खपत कम गर्नुहोस्। यसको अतिरिक्त, तपाईं अम्लीय मसालेलाई तपाईंको छनौटको स्वादको साथमा इन्कार गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि ओक, जडी बूटी, मिर्च, वा रस जस्तै रसबेरी। सिरका र ध्वनिमा कटा वा मार्को स्वादको स्वाद थप गर्नुहोस्। लामो अल्ट्रासोनिक उपचार, अधिक तीव्र स्वाद रिहा हुन सक्छ। कच्चे माल को गिरावट को रोकन को लागि बस ओहट मत करो। फिल्टर पेपरको माध्यमबाट निकास गर्नुहोस्।
अधिक वैज्ञानिक पृष्ठभूमिको लागि अल्ट्रासोनिक सिरका उमेर, यहाँ क्लिक गरेर अधिक जान्नुहोस्!
हेलसिचको व्यापक उत्पाद दायराले निजी रसोईघरमा महत्वाकांक्षी कुकहरूमा प्रयोगको लागि साना अल्ट्रासोनिक्स प्रदान गर्दछ र अत्यधिक व्यावसायिक शेफको लागि ठूलो अल्ट्रासोनिक होमगेनसरहरू र उनीहरूको ठूलो ग्यास्ट्रोमेस्ट्रीको भान्साको लागि ठूलो अल्ट्रासोनिक।
हामीलाई आफ्नो उद्देश्य बताउनुहोस् – हामी तपाईंलाई एक उपयुक्त उपकरण सिफारिस गर्न खुसी छौं!
मिशेलिन स्टार-सम्मानित रेस्टुरेन्ट विला Mittermeier को क्रिस्टियन Mittermeier संग Uf200 ः टी एक अल्ट्रासोनिक पायसन तयार गर्दै
अल्ट्रासोनिक रूपमा ककम्बर पाउडर तयार
अल्ट्रासोनिक Uf200 ः टी